Fahantrana | Pakysse
Archive for the ‘Fahantrana’ Category
DIASPORA MALAGASY: Aza omena any Onitiana Realy sy Beatrice Atallah ny volanareo!
novembre 27, 2015 in 2015, Ady Hevitra, Asa sosialy, Creative Commons, Fahakiviana, Fahantrana, Fanapareham-pahefana, Fandraisana andraikitra, Fanehoana hevitra, Fangalarana ny volam-panjakana, Fiainam-pirenena, Fomba Fisainana Mivelatra, Internautes, internet, Madagasikara, Mafia malagasy, Malagasy, Mpanao politika, nTIC, Politika, Revolution web2.0, T4D-M4D, Toe-tsaina mila miova, Tontolon'ny internet, Web 2.0, Zon'olombelona
Raha te ho lasa adala ianao na te hidiran-doza na te ho tapaka lalandra! Omeo any Onitiana Realy sy Beatrice Atallah ny volanao dia ho avy mora aminao foana ireo zavatra voalazako ireo.
Tsy aiko ny fandehany amin’izao ora sy fotoana hanoratako izao. Ohatrinona ny vola efa voangona any amin’ny ramatoa minisitra Realy sy ramatoa ministra Atallah momba ity resaka DIASPORA MALAGASY tiany andray andraikitra ho any firenena ity! Raha mbola tsy misy izay dia tsara sy deraina ny fihetsika asehonareo ry namana. Aza manome fa efa mivoaka ny fefiloha ny voay amin’izao fotoana izao ary tena mandrapaka sy manaikitra izay hitany rehetra eny an-dalambe ry zareo.
Tandremo ry namana malagasy mitady ravin’ahitra aty ivelany fa mamely miafina be ihany koa ny Trambo sy ny biby Dia. Ary manao izay fomba rehetra hitany hitadiavana vola hamenoana ny paosy sy hitadiavana voninahitra.
Maro amintsika angamba no efa mahafantatra fa nahazo fiarakodia tsy mataho-dalana TOYOTA V8 ny minisitra ny mponina malagasy Onitiana Realy. Tsy nila niasa ela akory ity farany dia efa miliara ny ao am-paosy vao maika izany fa omenareo fanampiana izy, vola tsy nosasarana fa vola adala tompo. Draisy! « Lavie est belle » na « milay be ny fiainana ».
Mamboly voky, tsy mamboly voky
Amin’ny ankapobeny, ny politika no sehatra lehibe indrindra handaminana ny fiarahamonina, hitadiavana ny soa sy ny tsara ho any firenena. Rehefa tsy mamely ny politika dia manaraka izay onjany izay ny fandehany toe-draharaha! Eto dia tiako sarihina kely vetivety ny sainareo mpanaraka tsy tapaka ity blog ity fa zavatra mahagaga sy mahatalanjona hatrany ny zava-baovao eo amin’ny fampianarana ny ratsy asehon’ireto politisianina malagasy ireto.
Rehefa avy « niala an’Akatso » dia « miditra an’Ambohidempona » indray isika malagasy! Tsy henatra, tsy tahotra ary fasahiana feno habibiana ny fandikako izao fihetsika asehony ramatoa onitiana Realy izao manoloana ny fividianana ity fiara mitentina aminà miliara ity.
Minisitra misahana ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ianao ramatoa dia sahinao ny mandakà ireo olona ireo any @ ambavafoany! Olona tsotra, sahirana, mila fanampiana avy any aminao. Olona tsy be teny, mahay miharitra ny fery ao aminy. Olona nabadoana amin’ny fomba maro samihafa, manantena ny ho avy mamiratra hatrany sns. Na dia olona maty heritreritra aza ve ianao ramatoa dia tsy mampaninona ny sainao mandinika izao fomba ratsy ataonao izao?
Ekena fa olona tsy niharitra, olona tsy mahafantatra izany atao hoe fahoriam-bahoaka izany ianao ramatoa minisitra. Mampiasa ny haino aman-jery, hitadiavana vola, dera sy laza ary ny voninahitra no tena talentanao! Teny tsara lahatra no betsaka fa ny ataonao dia mitovy amin’ireo namanao teo aloha sy ireo mpiara-miasa, mpangalatra tsy vanona sy tsy valahara, mpanao politika rehetra ireo.
Na mamboly voky na tsy mamboly dia voky hatrany ianareo mpanao politika ireo! Tohizo ny adalana, ataovy foana izay mety rehetra hangalarana sy hanaovana tsinotsinona ny mpiarabelona aminareo. Asehoy fa ianareo no tompony fahefana dia araraoty tsara sao rehefa very fihinana vao hitsipozipozy tahaka ireny rafotsy be banga ridana, tsy mahavidy solonify ireny ianareo mianakavy ao.
Toerana hifandimbiasana io Tompokolahy sy Tompokovavy. Mihevera tena fa mampahonena tanteraka ny fihetsika sy ny fomba amam-panao asehonareo. Tsindriko etoana fa tsy mahafaty na mahamenatra ny mampiseo monkodoha sy mitazona ny teny nomeny amin’ny fitadiavana ny soa sy ny tsara ho an’ny firenena sy ny mponina ao aminy. Rehefa misy ny fahadisoana dia tokony mahay miala tsiny, tsy tokony atao mipetraka eny amin’ny sisi-tosy ny azafady fa ampiasaina isan’andro amin’ny asa aman-draharaha izay nankinina taminareo.
Raha eo amin’ny lafiny ara-ekonomika dia marina tokoa fa manana ny maha izy azy ireo malagasy sasany, mpila ravin’ahitra ivelany Nosy. Raha ny ohatra aty Amerika Avaratra no zaraiko aminareo dia tahaka izao ny fandehany (Mitovy amin’izao ihany ny fandehany raha expat na olona manana asa tsara mipetraka any Afrika, Asie sy Europe ny malagasy iray tsara karama sy fivelomana).
Eo anelanelan’ny $40 000/an – $80 000/an ny atao hoe « classe moyenne ; Mihoatra ny $80 000/an ny saranga ambony na mpanakarena, mpanefoefo izay 1% ny mponina raha ny aty Canada no asian-teny.
Ny tiako lazaina dia ity: Maro ny malagasy mipetraka aty Amerika no manana ny maha izy azy. Raha ny fitadidiko dia taty mihitsy no nanao antso avo ny governemanta @ tokony andraisany Diaspora malagasy anjara @ fanarenana ny firenena.
Dia hoy aho manoro hevitra sy manipy ny teny any aminareo tapaka sy namana Diaspora malagasy ireo manao hoe: TSIA!
TSIA ny valiny satria olona misy saina sy hendry ianareo ireo ka mitandrema fa fisolokiana avo lenta ny anaranio hataka ataony governemanta-ny MAFIA malagasy io.
#T4D:Technology 4 development ; #M4D:Madagascar 4 development